Ndị isi ntọala ahịa azụmaahịa bụ na ị nwere ike nyochaa ma gụọ usoro atụmanya dabere na myiri na ndị ahịa gị. Ọ bụghị atụmatụ ọhụrụ; anyị ejirila data mee ihe ruo iri afọ ole na ole ugbu a iji mee nke a. Otú ọ dị, usoro ahụ na-agwụ ike. Anyị jiri ngwaọrụ wepụ, mgbanwe na ibu (ETL) iji wepu data sitere na isi mmalite iji wuo akụ na-etiti. Nke ahụ nwere ike were izu iji mezuo, ajụjụ ndị na-aga n'ihu nwere ike were ọnwa iji zụlite ma nwalee.
Ngwa ngwa ngwa ugbu a na ngwa ọrụ na-aghọwanye nke ziri ezi, algọridim ahụ dị ọkaibe karị, nsonaazụ ya na-akpaghị aka ma na-emeziwanye. '' Akụkọ Per Everstring, Ozi 2015 State nke Predictive Marketing Survey Report, nrutu nke ihe ato emeela ka odi ngwa ngwa nke ahia ahia:
Nnukwu data - ịzụrụ akụkọ ihe mere eme, akparamagwa, na data igwe mmadụ dị ugbu a site n'ọtụtụ ebe.
Ubiquity nke nnweta - nweta nkwanye data site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ esoro na njikọ jikọtara na-enye ọgaranya, ezigbo oge ọrụ.
Ihe dị mfe nke ígwé ojii - nnukwu ike kọmpụta site na igwe ojii, teknụzụ teknụzụ data data ọhụụ nwere oke na algorithms ndị bara ọgaranya na-enyere aka ịchụpụ ihe ọhụụ n'ọhịa ahịa amụma.
Gịnị bụ Predictive Marketing
Marketingre ahịa amụma bụ omume nke iwepụta ozi sitere na datasets ndị ahịa dị ugbu a iji chọpụta usoro na ịkọpụta nsonaazụ na usoro ga-eme n'ọdịnihu. Ozi 2015 State nke Predictive Marketing Survey Report
A na-achịkọta data na ndị ahịa dị ugbu a, algọridim a gbanwere na ezigbo oge, ma na-ebute ụzọ maka ikike iji gbaa nsonaazụ azụmaahịa. Ọzọkwa, mgbasa ozi na ndị na-ege ntị nwere ike ịtụle iji zụlite mkpọsa na nzaghachi amụma.
Amụma ịzụ ahịa ịkọ amụma ka bụ nwata. Ihe dị ka 25% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha nwere CRM bụ isi, ihe karịrị 50% kwuru na ha etinyela aka na azụmaahịa azụmaahịa ma ọ bụ na-achọsi azịza ike. Naanị 10% nke ndị zaghachiri kwuru na ha na-ejikọta CRM na akpaaka na teknụzụ ndị ọzọ iji mee ka nsonaazụ azụmaahịa pụta. Anyị enwetala nnukwu ọrụ!
Nke ahụ kwuru, ọhụụ na-enwe nchekwube. 68% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha kwenyere ịkọ amụma ga-abụ akụkụ dị mkpa nke nchịkọta ahịa na-aga n'ihu. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị a zaghachiri na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa na-ere ihe karịrị 50. 82% nke ụlọ ọrụ ndị nyefere ntinye akara na-enyocha ahịa amụma.
Ọ bụghị sayensị zuru oke, mana ọ nwere ikike ịbawanye ntụkwasị obi, njikọ aka, na ntụgharị n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere n'ọdịnihu dị nso. Na nke ahụ na-aga maka nsonaazụ mgbasa ozi ahịa yana nsonye na ndị ahịa gị. Ihe na-akpali akpali. Matt Heinz, Onye isi ala, Heinz Marketing.
Iji mụtakwuo banyere mmekọrịta dị n'etiti ahịa amụma na ihe ndị dịka ahịa otu, ogo ụlọ ọrụ, na ntozu oke azụmaahịa:
Budata 2015 State nke Predictive Marketing Survey Report
Budata akụkọ a maka azịza nye ajụjụ ndị a na ndị ọzọ:
Kedu otu ntozu oke na teknụzụ siri bụrụ oke ahịa?
Olee otú ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eji ahịa amụma taa?
Kedu ka ndị ahịa si eji ahịa amụma eme ihe ugbu a?
Kedu ka nha ụlọ ọrụ, nha otu, na usoro azụmaahịa si emetụta ntozu oke azụmaahịa yana ojiji nke amụma amụma?
EverString na-enye gị ohere ịwube pipeline ma mee ka ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na-agbanwe na naanị akaụntụ dabere na amụma, amụma zuru ezu nchịkọta azịza maka ire ahia & ire ahia. Ebumnuche Ebumnuche Ebumnuche nke EverString bụ ntinye dị mfe iji mejuputa onyinye SaaS nke na-ejikọta nke ọma na ahịa dị ugbu a na ngwa CRM iji chọpụta njirimara nke akaụntụ gị kachasị mma.
Tags: 2015nnukwu dataUgboro abụọheinz ahịainfographicmatt heinzamụma ịre ahịaamụma amụmaala nke ahịa amụma
Ọkt 26, 2015 na 7:16 PM
Ọmarịcha edemede. Ekele m. Banyere, Karel Paragh